Indlu esemaphandleni esecaleni komlambo - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni esecaleni komlambo
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguNicolas
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uNicolas iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Chalet Cévenol malunga ne-100m yesikwere. Ibekwe kude kancinane kwilali yaseCamprieu (600m), elunxwemeni lomlambo kunye nehlathi lesizwe, ixhamla ekuzoleni okuncomekayo kunye nokuzola.
Nceda ugcwalise inani labantu ngokuchanekileyo, ngoko ke ixabiso liya kulungelelanisa ngokwenani labahlali. Ixabiso lesiseko lihlala abantu aba-3.
Isilumkiso ! Amashiti, imiqamelo, iitawuli kunye nezinye azibonelelwanga !!
Indlu ye-100m2, umhombiso womoya weentaba.
Ukhululekile, ulungele ukufumana umoya omtsha!
Igumbi lokuhlala eli-1/ikhitshi le-25m2 elineesofa ezi-2 zabantu aba-4, umabonakude oyi-flatscreen oyi-108cm, ukufikelela kwi-wifi okungenamkhawulo.
Itafile ye-150 cm engqukuva kunye netafile ye-aperitif phakathi kweesofa.
Faka i-12Kw kwigumbi lokuhlala elinokusetyenziswa xa ucelwe kwangaphambili ukuba uza neenkuni zakho.
Amagumbi okulala ayi-2 kumgangatho osezantsi + 2 amanye aphezulu (afumaneka kuphela ngokuxhomekeke kwinani labantu)
Igumbi lokuhlambela eli-1 elineshawa kunye neWC
Ikhitshi ixhotyiswe ngokupheleleyo: ifriji enkulu, ifriji, isitya sokuhlamba izitya, isitovu seceramic, ioveni, umatshini wokuhlamba, umatshini wekofu weSenseo, imicrowave kunye neraclette kunye neseti yefondue.
I-15m2 i-terrace yamaplanga enembono enhle kakhulu yomlambo ongezantsi.
Amashiti, i-pillowcases kunye neetawuli zokuhlambela azibonelelwanga (khumbula ukuba uthathe ngokuxhomekeke kwiibhedi ezikhethiweyo), nangona kunjalo amashiti, imithwalo kunye neengubo ziyafumaneka kwisiza.
Isitovu sifikeleleka emva kwesicelo (sitshixiwe ngesitshixo), kwaye iinkuni azibonelelwanga, kuxhomekeke kuwe ukuba uze nayo.
Ukucoca kunye magciwane anti-covid kufuneka yenziwe ngokuchanekileyo nguwe phambi okuqalisa kunye hayi "ngokukhawuleza" zonke iimveliso mandikunike kwakunye nezixhobo ezifanelekileyo, isikali Airbnb ukuba ndiza kukunika ubukhulu becala uya kuxhomekeka uluvo ukucocwa yabahambi abaza kufika emva kwakho!
Ukuba unqwenela, ukucoca kunokwenziwa ndim ngaphambi kokufika kwakho okanye emva koko. Ngaphandle kokuhamba, ukonyuka kwe-150 € kuya kusetyenziswa. Nceda undazise ukuba lo ngumnqweno wakho ngaphambi kokuhlala kwakho!
Inani labantu abanokwenzeka kwi-chalet lilinganiselwe ngabom, ngaba ufuna ukurenta ngaphezu kwesibhozo okanye ezilishumi? Qhagamshelana nam !
4.71 · Izimvo eziyi-150
Ukuzola ngoxolo kuphumle kwaye kugcwele umtsalane!
Ifakwe kwi-8km ukusuka kwindawo yokuphumla ye-ski yasePratpeyrot.
Umbuki zindwendwe ngu- Nicolas
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Saint-Sauveur-Camprieu